Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Frequent Urination ဆီးသွားများခြင်း
Frequent Urination ဆီးသွားများခြင်း
Thu, Feb 16, 2012 at 6:24 AM
ကျွန်တော့် အသက် ၂၆ နှစ်ပါ။ အခု နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ သွေးချိုနဲ့ ဆီးချိုအကြောင်းသိချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် ညဘက် အိပ်ရင် ဆီးသွားဖို့ ခဏခဏ ထရပါတယ်။ ၅ ခါထက် မနည်းပါ။ အိပ်ရေးလည်း အရမ်းပျက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဆီးသွားတာ များလို့ ကောင်းကောင်းကို မအိပ်လို့ မရပါဘူး။ ရေကိုတော့ နေရောညရော များများ သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးစစ်ကြည့်တော့လည်း သွေးရော ဆီးရော ပုံမှန်ပါပဲ ကောင်းတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပိုသေချာအောင်လို့ ကျွန်တော့် ဆီး အနည်းငယ်ကို လျှာနဲ့တို့ကြည့်တော့ ချိုတော့ မချိုပါဘူး ငံတယ့်အရသာပဲ ရပါတယ်။ မျိုးရိုးလည်း မရှိပါဘူး။ အဲရောဂါတွေကဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆရာ။ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို နေထိုင် စားသောက်ရမလဲ။ ဆီးအရမ်းသွားတာက ရေသောက်များတာနဲ့ရော ပတ်သက်နေလား။ နေ့ဘက်မှာလည်း ဆီးခဏခဏ သွားရပါတယ်။
မေးတဲ့သူက ဆီးချိုကို အရင်သံသယရှိတာ မှန်တယ်။ ဆေးစစ်လိုက်တာလဲ ကောင်းတယ်။ ဆီးသွားများခြင်း အကြောင်းခံတွေ များတယ်။
1. Urinary tract infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊
2. Diabetes ဆီးချို၊
3. Pregnancy ကိုယ်ဝန်၊
4. Prostate gland enlargement ဆိးကျိတ်ကြီး၊
5. Prostatitis ဆီးကျိတ်ရောင်၊
6. Diuretic use ဆီးသွားဆေး၊
7. Stroke or other neurological diseases လေဖြတ်၊
8. Bladder cancer ဆီးအိမ်-ကင်ဆာ၊
9. Bladder dysfunction ဆီးအိမ်အားနည်း၊
10. Radiation therapy ဓါတ်ကင်ရခြင်း၊
11. Beverages အသောက်-အစား၊
12. Bladder stones ဆီးအိမ်-ကျောက်၊
13. Cystocele ဆီးအိမ်ကျ၊
14. Overactive bladder ဆီးအိမ် အလုပ်များခြင်း၊
15. Urinary incontinence ဆီးမလုံခြင်း၊
16. Hheart failure နှလုံး နိုင်အောင် မလုပ်နိုင်ခြင်း၊
• Urinalysis and urine culture ဆီးစစ်ခြင်း၊
• Ultrasonography (အာလ်ထွာဆောင်း)၊
• Cystometry ဆီးအိမ် ဖိအားစစ်ခြင်း၊
• Cystoscopy ဆီးအိမ်ထဲ ကရိယာထည့်စစ်ခြင်း၊
• Neurological tests, Urodynamics, Imaging, EEG, and EMG
Medical Treatment ဆေးနည်းများ
• Urinary tract infection ဆီးလမ်းပိုးဝင်နေရင် ဆီးခဏခဏသွားမယ်၊ ဆီးပူမယ်၊ ဆီးသွားရင် နာမယ်၊ ဆီးစပ်နေရာနာမယ်။ Antibiotics ဆေးပေးမယ်။ ရေ-အရည် များများသောက်ရမယ်။
• Diabetes ဆီးချိုဖြစ်ရင် ကုသနည်းအတိုင်းကုသ၊ လိုက်နာရမယ်။
• Prostate problems ဆီးကျိတ်ရောဂါအတွက် 5ARIs (5-alpha-reductase inhibitors) ဆေးနဲ့ Alpha blockers ဆေးတွေသုံးရတယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ရမယ်။
• Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဆီးများတာဖြစ်ရင် အစား-အသောက်ဆင်ခြင်ခိုင်းတာကလွဲရင် သိပ်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
• Interstitial cystitis ဆီးအိမ်ရောင်ရောဂါတမျိုးအတွက် Pentosan polysulfate sodium (Elmiron), Tricyclic antidepressants ဆေးတွေ၊ Pain medications ဆေးတွေနဲ့ Antihistamines ဆေးတွေသုံးတယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ရမယ်။
• Stroke or other neurological diseases လေဖြတ် စတာတွေဆိုရင် သူ့နည်းလမ်းနဲ့သူ ကုသမှုခံယူရမယ်။
• Bladder cancer ဆီးအိမ်-ကင်ဆာ Chemotherapy, Radiation, and/or Surgery နည်းတွေနဲ့ကုသမယ်။
• Overactive bladder syndrome ဆီးအိမ်က အလုပ်လုပ်တာ များလွန်းနေတာဆိုရင် Bladder retraining လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်။ Tolterodine (Detrol LA), Oxybutynin (Ditropan), Darifenacin (Enablex), Transdermal oxybutynin (Oxytrol), Trospium (Sanctura XR), Imipramine (Tofranil) နဲ့ Solifenacin (VESIcare) ဆေးတွေပေးမယ်။
Self-Care at Home ကိုယ့်ဖါသာ ဂရုစိုက်ခြင်း
(၁) Bladder retraining ဆီးအိမ် လေ့ကျင့်ခန်း၊ Overactive bladder syndrome ဖြစ်နေသူအတွက် လိုအပ်တယ်။ ဆီးအိမ်မှာ ဆီးရှိ-တင်းလာလို့ သွားချင်စိတ်ဖြစ်လာတာကို စိတ်နဲ့ထိန်းပေးရမယ်။ ခါတိုင်းသွားမဲ့အချိန်ကို နောက်ဆုတ်နိုင်သလောက် ဆုတ်နည်းဖြစ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အချိန်ဆန့်တာ ပိုရှည်ကြာလာရမယ်။ ၁၂ ပါတ် (၃ လ) အထိ အချိန်ယူနိုင်တယ်။
(၂) Kegel exercises (ကီဂယ်လ်) လေ့ကျင့်ခန်း၊
ဆီးသွားနေတုံး ဆီးမကုန်ခင် ရပ်ဘို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ အတွင်းထဲက Pelvic floor muscles သက်ဆိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ အရွတ်တွေကို တင်း-ကျုံ့ပေးမှ ရတယ်။ ဒီလို ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေကို စိတ်နဲ့သိသွားရင် တကယ်ဆီးမသွားပေမဲ့ နေရင်ထိုင်ရင်း Squeeze တင်းလိုက်၊ Relax လျှော့လိုက်လုပ်ပေးနည်းဖြစ်တယ်။ Tone ကောင်းလာစေမယ်။ တကြိမ်မှာ ၃ စက္ကန့် တင်းလိုက်၊ ၃ စက္ကန့် လျှော့လိုက်နဲ့ ၁ဝ-၁၅ ခါလုပ်ပါ။ တနေ့ ၃ ခါလုပ်ပါ။
(၃) Modify your diet အစား-အသောက်ဆင်ခြင်ပါ။ Caffeine (ကေဖင်း)၊ Alcohol (အရက်)၊ Carbonated drinks (ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့အရည်တွေ၊ Artificial sweeteners ပိုချိုအောင်လုပ်ထားတဲအရည်တွေ၊Tomato-based products ခရမ်းချဉ်းသီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အရည်တွေ၊ Chocolate (ချော့ကလက်) နဲ့ Spicy foods စပ်ပူတာတွေ ရှောင်ပါ။ High-fiber diet အသီးအရွက် များများစားပါ။ ဝမ်းချုပ်တာက ပိုဆိုးစေတယ်။
(၄) Monitor fluid intake ရေ-အရည်သောက်တာ လျှော့ပါ။
Posted by Dr. Tint Swe at 3:10 PM